IOS 13.7 yonakalisa ukusetyenziswa kwebhetri kwi-iPhone yamva nje, kodwa hayi eyakudala | IPhone iindaba
IOS 13.7 yonakalisa ukusetyenziswa kwebhetri kwii-iPhones ezintsha, kodwa hayi ezindala
UIgnacio Sala | | iOS 13, Izaziso
Ibhetri kwaye iya kuqhubeka ukuba yenye ye ezona zinto zibalulekileyo kubo bonke abasebenzisi, kuba ixhomekeke ekubeni singayisebenzisa i-iPhone yethu ngaphandle koloyiko lokuphela kwebhetri nangaliphi na ixesha. Ngokumiliselwa kule veki iphelileyo ye-iOS 13.7, uthelekiso lwe-iOS 13.6.1 lwaluyimfuneko.
Kuyimfuneko kodwa kunganyanzelekanga kuba zonke iimodeli eziza kuhlaziywa kwi-iOS 14 ziyafana ezonwabela i-iOS 13 ngoku, ke ukuba i-iOS 13.7 luguqulelo lokugqibela kwaye inikezela ngokusetyenziswa kwebhetri ehlengahlengisiweyo, njengoko kunjalo nge-iPhone 11, i-iPhone SE 2020, nge-iOS 14 yonke into kufuneka ilungiswe.
Kwakhona, abafana abakwiAppleBytes benze ifayile ye- Thelekisa phakathi kwe-iOS 13.7 kunye ne-iOS 13.6.1, kwi-iPhone SE, i-iPhone 6s, i-iPhone 7, i-iPhone 8, i-iPhone XR, i-iPhone 11 kunye ne-iPhone SE 2020.. Ukusuka kolu vavanyo lwenziwa rhoqo kuvavanyo lwebhetri olukhoyo kwisicelo seGeekbench, siyabona ukuba zombini i-iPhone 11 kunye ne-iPhone SE 2020, iimodeli ezisungulwe ngasekupheleni kuka-2019 nasekuqaleni kuka-2020, zezona zichaphazeleka ngokubhekisele ekusebenzeni kweBhetri.
Kuya kwenzeka ngokuchaseneyo nezinye iitheminali eziyinxalenye yothelekiso. I-iPhone SE, i-iPhone 6s, i-iPhone 7, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone XR inikeza ubomi obufanayo okanye obungcono bhetri nge-iOS 13.7 Ngaphandle kwe-iOS 13.6.1, ngakumbi kwi-iPhone 7 kunye ne-iPhone 8, apho ukuzimela kunyuke kakhulu xa kuthelekiswa neenguqulelo zangaphambili ze-iOS 13 ezazisungulwe kwintengiso.
Olu hlaziyo kubonakala ngathi yenzelwe iimodeli ezindala, kuba ikwezi zinto apho zibonelela ngokuzimela okukhulu. Ezi ziphumo zibonisa kwaye zisekwe kuhlalutyo olwenziwe sisicelo seGeekbench, ke kusenokwenzeka ukuba mihla le ungakhange uqaphele naluphi na uphuculo.
Ngaba uqaphele ukuba kukho inkqubela phambili emva kokufaka i-iOS 13.7 kwibhetri? Ngaba ibhetri ihlala incinci? Sazise izimvo zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » IOS 13.7 yonakalisa ukusetyenziswa kwebhetri kwii-iPhones ezintsha, kodwa hayi ezindala
UHector Bianchini sitsho
Kwi-iPhone 8 Plus ubude bunye. Apho ndiqaphele ukuba umahluko ukwipas mini 4. Ubomi bebhetri bungaphantsi kakhulu. Ngethemba lokuba bayayiphucula. Enkosi
Phendula Hector Bianchini
Ibhetri ihlala ngokufanayo, kuphela ngumgangatho webhetri uqobo oluchaphazelekayo kunye nesantya xa kuvulwa usetyenziso naxa ukhangela kwi-Intanethi.
UJose Gonzalez sitsho
Nge-ios 13.7 ibhetri iyashushu xa utshaja kwaye ukuba ufaka i-covid radar appl, ayiwuhlaziyi umhla kwaye izikrini azingqinelani neapp
Phendula kuJose Gonzalez
Ukuphuculwa kwangaphakathi kwikhamera ye-iPhone 12 ukuziqhelanisa ne-5G
Okokugqibela, i-LG iya kubonelela nge-AirPlay 2 kunye neKhayaKit kwiimodeli zayo ze-2018